China Izimpaphe Zendwangu Yezingubo Zokuhlobisa China Manufacturers & Suppliers & Factory
Izimpaphe Zendwangu Yezingubo Zokuhlobisa - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Izimpaphe Zendwangu Yezingubo Zokuhlobisa)
Indwangu Yezindwangu Yezikhumba Ehlanganisiwe
Indwangu yethu ye-Feather Handmade Beaded Embroidery yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho-ke indwangu yethu yokufakelwa kwendwangu yothayela iyanethezeka kakhulu futhi ayintekenteke. Imibala yomehluko ingakhethelwa ukugqoka kwephathi,...
Ubuhlalu obumbathisa indwangu yezingubo zekhebula Indwangu yokugqoka
I-Model No.: QC007
Ubuhlalu obumbathisa indwangu yezingubo zekhebula Indwangu yokugqoka Item No. white lace fabric QC007
Izindwangu Eziphezulu Zendwangu Emhlophe Yekhwalithi Ephakeme
Izindwangu Zokuhlobisa Izinga Eliphezulu le-Strand Lace Embroidery
Indwangu Yezindwangu Ehlanganisiwe Yezingubo
Indwangu Yezindwangu Yezingubo Zomshado
Izimpaphe Zezinyoni Eziyinqaba IJacquard Elegant Fabric
Ipateni lesikhumba se-Purple Satin, uJacquard Fabric, lakhiwe ngendlela eyakhiwe ngayo lapho izindwangu zihlanganiswa phakathi kwezindwangu kanye nokwebela. Amaphethini amahle ahlukahlukene anjengezimbali, izinyoni, izinhlanzi, izinambuzane nezilo, njll. Angalulwa ngendwangu ye-satin jacquard. Izinto zokwenziwa...
I-Beige Quilited Denim Jacquard yakhiwe ngephethini ehlanganisiwe lapho izindwangu zihlanganiswa phakathi kwe-warp ne-weft. Amaphethini amahle ahlukahlukene anjengezimbali, izinyoni, izinhlanzi, izinambuzane nezilo, njll. Angalulwa ngendwangu ye-jacquard evilisiwe. Izinto zokusetshenziswa ezisetshenziselwa i-denim...
Amandla Wokunikezela: 150000 yards per month
Indwangu ebushelelezi ne-Mysterious Chantilly Tulle Floral Lace Fabric ilethe umkhuba omusha emhlabeni wezemfashini, ophinde ulethe amathuba angenamkhawulo wobuhle bokugqokwa kwabesifazane. Indwangu yethu ye-chantilly tulle lace yenziwe ngezinto eziyikhulu zepayipi, futhi ilula kakhulu futhi inciphile, efaneleke...
Njengenye yezitayela ezithandwa kakhulu okwamanje, Indwangu ye-Shape Tulle Gliiter Fabric isetshenziswa kabanzi ekugqokeni komshado nokugqoka kwakusihlwa. I-Sparkle iyisici esiyinhloko somshado wethu wendwangu ekhazimulayo. Umshini wethu wokukhiqiza ungeniswa usuka eGarment, usawoti osindayo we-Ultra laini sliver...
Indwangu yethu yeRed Handwork Embroidery Designe Fabric yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke indwangu yethu eyenziwe ngezandla eyenziwe ngentambo inethe xaxa futhi ibuthaka. Imibala yokwehluka ingakhethwa okokugqoka kwephathi, ukugqoka...
Indwangu yezimbali emnyama yeBlack Beaded 3D Yezingubo
Indwangu yethu yezimbali emnyama yeBlack Beaded 3D yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho-ke i-Embroidery Lace Fabric 3d Flower yethu enobuhlalu iyanethezeka futhi ibucayi. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka...
Indwangu ekhanyayo ye-Light Purple Indian Embrodiery Lace Yezingubo
Indwangu ye-Light Purple Indian Embrodiery Lace Indwangu inemibala egqamile, ebukeka kabi futhi inomqondo oqinile wokuqamba nephethini yokulinganisa. Izindwangu ezenziwe ngendwangu yomcako womshado wase-african zibukeka zihle futhi zibukeka ngamehlo. Nge-100% yezingubo zamehlo, indwangu yokufekethisa yaseNdiya ayilula...
Indwangu engcolile ye-Pink Metallic Jacquard Yezingubo
Indwangu engcolile ye-Pink Metallic uJacquard yenziwe yakhiwa ngephethini ehlanganisiwe lapho izindwangu zihlanganiswa phakathi kwe-warp ne-weft. Amaphethini amahle ahlukahlukene anjengezimbali, izinyoni, izinhlanzi, izinambuzane nezilo, njll. Angalulwa ngendwangu engcolile ye-pink jacquard. Izinto zokwenziwa...
Indwangu yeGolide Floral Chenille Jacquard Yezingubo
Indwangu ye-Gold Floral Chenille Jacquard yakhiwe ngephethini ehlanganisiwe lapho izindwangu zihlanganiswa phakathi kwe-warp ne-weft. Amaphethini amahle ahlukahlukene anjengezimbali, izinyoni, izinhlanzi, izinambuzane nezilo, njll. Angalulwa ngendwangu emnyama yejacquard. Izinto ezingavuthiwe ezisetshenziselwa...
I-Purple Strecth Jacquard Brocade Yezingubo
I-Purple Strecth uJacquard Brocade yakhiwa iphethini ehlanganisiwe lapho izindwangu zihlanganiswa phakathi kwe-warp ne-weft. Amaphethini amahle ahlukahlukene anjengezimbali, izinyoni, izinhlanzi, izinambuzane nezilo, njll. Angalulwa ku-jacquard brosha. Izinto ezingavuthiwe ezisetshenziselwa indwangu elukiwe...
Izimpaphe Zendwangu Yezingubo Zokuhlobisa
Indwangu Yezinto Zokuhlobisa
Izindwangu Zendwangu Yezokuhlobisa
Indwangu Emhlophe Yezikhumba Zokuhlobisa
Indwangu Yomshado Wokuhlobisa
Izindwangu Zendwangu Yezandla